News Mansarovar » नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलित – News Mansarovar
बाँके\_नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चार महिनादेखि तलव भत्ता नपाएको भन्दै चिकित्सक र कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरु आन्दोलनको पहिलो दिन बिहीवार अस्पताल प्रशासन अगाडी एक घण्टा धर्ना बसेका थिए । विहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म हातमा कालो पट्टी बाँधेर धर्ना बसेका थिए । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज प्राध्यापक परिषद्को अगुवाईमा आन्दोलन थालिएको हो । परिषद्को अध्यक्षमा डा. विनोद महासेठ छन् । तदर्थ समितिका रुपमा रहेको यो परिषद् दर्ताको प्रक्रियामा छ ।
अस्पतालमा कार्यरत प्राध्यापकको पेशागत हकहित एवम् प्राज्ञिक गरिमा, मानमर्यादा र उन्नतिका लागि परिषद् गठन गरिएको परिषद्का सचिव डा. अरुण महतले बताए । यही परिषद्को अगुवाईमा चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । चिकित्सकहरुले मासिकरुपमा पाउनुपर्ने तलव माघ महिनादेखि नपाएको बताएका छन् । यस्तै प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको पनि महिनौं वितिसकेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
‘अस्पताल जस्तो संवेदनशील थलोमा आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर हुँदै होइन, परिषद्का सूचना अधिकारी समेत रहेका सचिव महतले भने–‘अस्पताल प्रशासनले तलवभत्ता नै नदिएपछि के गर्नु ?’ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा ११४ जना चिकित्सक छन् । अधिकांशले तलवभत्ता नपाएको डा. महतको भनाई छ । यस्तै अन्य कर्मचारीले पनि तलवभत्ता नियमित पाउन नसकेको गुनासो सुनाएका छन् ।
सामाजिक सेवा इकाई प्रमुख रामबहादुर मल्लले परिषद्को आन्दोलनमा आफूहरुको पूर्ण साथ रहेको बताए । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस बाँकेका अध्यक्षसमेत रहेका मल्लले अस्पताल प्रशासनले आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल निकास निकाल्नु पर्ने बताए ।
चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुलाई तलवभत्ता नदिए कडा आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत् बिहीवार र शुक्रवार हातमा कालो पट्टी बाँधेर एक घण्टा धर्ना दिने र माग सम्वोधन नभए १६ गतेदेखि आंशिकरुपमा ओपिडी सेवा बन्द गर्ने परिषद्को चेतावनी छ ।
अस्पताल प्रशासनले भने कोभिड महामारीकै असरले नियमित तलवभत्ता दिन गाह्रो भइरहेको बताएको छ । प्रशासन प्रमुख कुमार अधिकारीले कोभिड महामारीका कारण त्यसको असर अहिले पनि अस्पतालमा परिरहेकाले समयमा तलवभत्ता दिन नसकिएको बताए ।